Sezvo Patrick Mahomes achigadzirira kurwira yake yechipiri akateedzana Super Bowl MVP mubairo Svondo inotevera, Tampa Bay Buccaneers quarterback, Tom Brady, anokodzera yechipiri yake mumwaka mishanu uye yechina yakazara. Panguva imwe, Bitcoin sportsbooks vanoda kuti munhu wese ave nenguva yakanaka achiisa mabheji, kuhwina mibairo mikuru, uye kunakirwa nechiitiko cheNFL kupfuura nakare kose.
Kukunda mubairo uyu hakusi kufamba mupaki kune maviri epamusoro-tier makota. Vachafanirwa kuhwina Super Bowl LV- mutambi mumwe chete akambobvuta zita reMVP mushure mekukundikana kuhwina mutambo weSuper Bowl. Kunyangwe iwo MVP zita rinowanzo kupihwa kune quarterback, kune vamwe vanokwikwidza iyo MVP mubairo. Mamwe emazita anouya mundangariro anosanganisira Shaquil Barrett nehunhu hwake hwekuzvidzivirira uye Travis Kelce uyo anozivikanwa kuve mutambi akasimba end end.
Mushure mekutarisa iyo kutanga Super Bowl LV kusanzwisisika, zvakakoshawo kuti uzive kuti misika yemakambani eMVP yechiitiko iyi inozivikanwa. Nezvo zvichitaurwa, heino pfupiso iyo inogona kukubatsira iwe kusarudza pakati pevanokwikwidza.
Super Bowl LV MVP Kufungidzira
Tyreek Chikomo 21-1
Kunyangwe hazvo matatu eanomwe ekupedzisira Super Bowl MVP's anga asiri quarterbacks, vasere veakadarika gumi nerimwe vaive vafoni. Sezvo iyo Super Bowl LV inotarisirwa kununura mhosva zhinji kupfuura kuzvidzivirira, tinogona kutarisira kuti mubairo uende kukotaback. Izvi zvega zvinogona kukuudza kuti makota-maabhureki ndivo vanofarirwa vanokunda.
Sezvo madzishe anowana ruoko rwepamusoro mune iyi matchup, minwe inonongedzera kune quarterback MVP anokunda. Kana maChief akachengetedza zita iri, Mahomes anozotumidzwa MVP zvakare, achimupa mazita ekudzokera kumashure. Zvichakadaro, anokunda maBuccaneers angangove korona ane makore makumi matatu nematatu Tom Brady kuti asimbise iyo ngano inopera.
Ehezve, sarudzo dzako hadzingogumira ipapo. Kune vanobheja vanoda kuyedza mhanza yavo, ongorora iyo mitambo yekutengesa marudzi uye zvinopesana, tichifunga kupfuura-rusher saBarrett naJones vanogona kungobhadhara. Izvo zvambotaurwa zvinogona kutora nyore mutambo uye kuhwina mubairo. Izvi zvaive pachena apo wekunze linebacker, Von Miller, akabatsira iyo Denver Broncos kuhwina Super Bowl 50.
Pakupedzisira, isu tinokurudzira kuritamba zvakachengeteka sezvo uyu mubairo-wakatarisana nemubairo ungangoenda kunaPatrick Mahomes gore rino.